Ambongadiny VG10 vy miakanjo volom-bolo, mpanety, mpanamboatra hety | Icool
VG10 Gunting volom-borona tsy miova firy
Modely ： IC-55-1
● Ny hetra ICOOL dia tsy mamokatra hety matihanina miaraka amina fahombiazana lafo vidy sy fomba fiasa tsara fotsiny. Avelao ny mpanety hihevitra ny fahafinaretan'ny hety avo lenta rehefa mampiasa hety, ary hanatsara ny fahombiazan'ny asa.
● Volo volo matihanina 5.5-inch, fitaovana vy tsy misy fangarony VG10, ny halavan'ny hety dia mety amin'ny tanan'ny ankamaroan'ny olona. Azo ampiasaina hanapaka ny fomban-dehilahy sy ny volo lava ho an'ny vehivavy.
● Ny famolavolana tahony dia mamaky ny asa-tanana nentim-paharazana, ary ny paosin-tànana telo refy namboarina araka ny ergonomika dia mahazo aina kokoa. Na dia mampiasa hety mandritra ny fotoana lava aza ianao dia tsy hiteraka fahasimbana eo amin'ny hatotananao, soroka ary kiho.
● Ny hety dia mampiasa fomba fanapahana tsipika mahitsy, ary ny atin'ny ravina dia mivolitra, izay mampitombo ny hamafin'ny hety. Ny sisin'ny tsipika mahitsy dia mampihena ny fifandirana eo anelanelan'ny lelany ary manokatra sy mihidy tsara kokoa. Mety amin'ny fanapahana volo, fanaovana isa ary fandidiana volo lena sy maina.
● Ny hety dia mampiasa borosy fisaka avo lenta mba hanamboarana ny lelan'ny hety hahazoana antoka fa afaka misokatra sy mihidy tsara foana ny hety mandritra ny fizotran'ny fanapahana. Ny làlana dia mifanaraka amin'ny haavony mitovy amin'ny hety, noho izany dia tsy ilaina ny manahy momba ny volo voafandrika amin'ny visy.
Teo aloha: Gunting Barber VG10 vita tanana vita tanana vita amin'ny sary voasokitra
Manaraka: Hevitra mafana amidy volo napetraka miaraka amin'ny tahony vita sokitra